ओली र नेपालबीच भेटवार्ता, के भयो कुराकानी ? - Everest Dainik - News from Nepal
ओली र नेपालबीच भेटवार्ता, के भयो कुराकानी ?
काठमाडौंः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीच भेटवार्ता भएको छ । सोमबार बिहान ओली र नेपालबीच प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भेटवार्ता भएको हो ।
उनीहरूबीच पार्टीमा देखा परेका समस्या समाधान गर्ने विषयमा छलफल भएको स्रोतले जनाएको छ । स्रोतका अनुसार दुई नेताबीच मिलेर अघि बढ्ने र पार्टीभित्र देखा परेका समस्या व्यवस्थापन गर्ने विषयमा कुराकानी भएको छ ।
याे पनि पढ्नुस प्रधानमन्त्री ओलीलाई झाँक्रीको राजनीतिक व्यङ्ग्य !
अध्यादेश प्रकरणपछि नेकपामा विवाद चुलिएको छ । विवाद समाधान गर्ने क्रमको निरन्तरता स्वरुप ओली र नेपालबीच भेट भएको हो ।
सोमबार अपरान्ह प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा ओली पक्ष र नेपाल पक्षका नेताहरुबीच समझदारीका लागि‘निर्णायक छलफल बताइएको छ । त्यसका लागि ओली पक्षबाट वार्ताका लागि उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, महासचिव बिष्णु पौडेल, ५ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली तोकिएका छन् । त्यस्तै नेपाल पक्षबाट बरिष्ठ नेता नेपालसहित स्थायी कमिटी सदस्यहरु भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे र रघुजी पन्तलाई तोकिएको स्रोतले जनाएको छ ।
त्यसअघि ओली र नेपालले भेट गरेका हुन् । फाइल फोटो
ट्याग्स: केपी शर्मा ओली, नेकपा, बालुवाटार